Andron’ny indostria aty Afrika : Fanodinam-bokatra eto an-toerana ho an’i Madagasikara | NewsMada
Nankalazaina, omaly, tao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ny Andron’ny indostria aty Afrika 2020. Nitarika ny fotoana ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny indostria (Onudi), ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana ary ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (Sim).
Navoitra tamin’ny An­dron’ny indostria aty Afrika ny fifanakalozana malalaka ao anatin’ny fifaninanana, izay misy tse­na mahatratra 3 000 miliara dolara aty Afrika. Mitaky vokatra betsaka avy amina fi­renena isanisany izany, ampy ho an’ny tsena anatiny sy hoentina eo amin’ny tsenan’ny fifanakalozana. Ma­no­hana izay tetikasa misy mangaraharaha mankany amin’izany tolotra izany ny Onudi. Ho an’i Madaga­si­ka­ra, fanamby napetraka ny fa­nomezan-danja ny fanodinam-bokatra eto an-toerana ho an’ny tsena anatiny, koa hampirisihina ny mpanjifa hirona amin’ny vita malagasy. Aorian’izay ny tolotra ho an’ny tsena ivelany hifaninana amin’ny hafa.
Mifamatotra ny indostria sy ny varotra ka manafaingana izany ny fampiasana an­govo azo havaozina, ny fidirana amin’ny teknolojia vaovao, ny fiantsoana ny mpampiasa vola mivantana avy any ivelany. Mitombo hatrany ny fampiasam-bola aty Afri­ka ataon’ireo firenen-dehibe, efa nahatratra 49 mi­li­ara dolara tamin’ny 2019, saingy tamin’ity taona ity, nosembanin’ny Covid-19.
Indostria iray isaky ny distrika iray
Notsiahivin’ny minisitra Ra­kotomalala Lantosoa, fa tsara toerana ny indostria ma­lagasy tamin’ny taon-dasa sady nahazo fanohanana tamin’ny Onudi. Mbola anatin’izay fampiroboroboana ny indostria malagasy izay ny politikan’ny fitondram-panjakana: Indostria iray isaky ny distrika iray. Ankoatra ireo orinasa tafatsangana tamin’ity taona ity, hisy tetikasa fananganana in­dostria iray goavana ma­no­dina ny vokatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono any atsimo andrefana, amin’ny taona 2021, vatsin’ ny Bad vola.
“Eto Madagasikara, isan-taona, mankalaza ny An­dron’ny indostria aty Afrika, ahafahana manao jery todika ny zava-bita sy hijerena ny ho avy miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka, sehatra tsy miankina”, hoy ny minisitra Rakotomalala Lan­tosoa. Napetraka ny lo­hahevitra hoe fampandrosoana ny indostria maharitra, manolona ny fisokafan’ny tsena aty Afrika sy fiatrehana ny fandalovan’ny valanaretina coronavirus.